Mogadishu Journal » Milatariga Itoobiya oo Wali gacanta ku haaya Jigjiga
Milatariga Itoobiya oo Wali gacanta ku haaya Jigjiga
Mjournal :-Xaaladda Magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad degaanka Soomaalida ayaa maanta degan, waxaana halkaasi howlgallo ka wadda Ciidamada Milatrariga.
Ciidamada Milatariga Itoobiya ayaa wali gacanta ku haaya Magaalada Jigjiga, waxaana guud ahaan Magaalada laga saaray Ciidamada Liyuu Boolis.
Qaar badan oo ka mid ah dadkii degenaa magaalada Jigjiga ayaa gobollada kala aaday.
Ammaanka Magaalada Jigjiga ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana wali taagan Cabsi.
Sidoo kale Boqolaal qoys oo ku sugnaa magaalada xadka ku taalla ee Wajaale ayaa u tallaabay dhanka Somaliland, inkastoo aysan dhibaato ka dhicin halkaas haddana dadka ka cabsi qaba in rabshadihii ka dhacay magaalada Jigjiga Sabtidii ay halkaas ku faafaan.
Meydadka Dad Oromo ah oo laga helay Boosaaso iyo howlgallo ka socda